रेनकोटको रूपमा "वाटर-रेपेलेन्ट" कपडा प्रयोग नगर्नुहोस्।
वाटरप्रूफ कपडा र पानी-विकर्षक कपडा बीचको भिन्नता सामान्यतया, पानी-विकर्षक कपडा पानी-विकर्षक कपडाबाट बनेको हुन्छ। पानी फेब्रिकको सतहमा ड्रप बनाउँछ (केवल कमलको पात जस्तो)। तर, तर यो वास्तवमै वाटरप्रूफ छैन, तर पानीको शोषणलाई कम गर्दछ ...
वर्षा दिनहरूमा रेनकोटको लागि तपाईं कुन रंगलाई रुचाउनुहुन्छ? के तपाईंलाई रेनकोटको लागि सबैभन्दा सुरक्षित र know्ग थाहा छ?
रेनकोटको लागि कुन रंग सबैभन्दा लोकप्रिय छ? बरसातको दिनमा, कमजोर दृश्यको कारण, उज्यालो रंगको साथ रेन्कोट लगाउनु राम्रो हुन्छ पैदलयात्रीहरूलाई सम्झना गराउन र सवारी साधनहरू तपाईंलाई ध्यान दिनको लागि। जस्तै उज्यालो रातो, चहकिलो पहेंलो, सुन्तला, हरियो आदि परावर्तक पट्टी संग रेनकोट ...
रेनकोटको लागि कुन सामग्री राम्रो छ र कसरी रेनकोट छनौट गर्ने?
जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, बरसातमा मौसम परिवर्तन हुन्छ। यो वर्षाको दिनमा बाहिर जान समस्या हो। यदि त्यहाँ छाता छ भने पनि, ट्राउजर र जुत्ताहरू भिज्ने छन्, विशेष गरी जब वर्षा र बतास कडा हुन्छ, छाता हामीलाई बचाउनको लागि पर्याप्त छैन। त्यसोभए उच्च गुणवत्ता छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
वर्षा कोट महिला, पु रेनकोट, Kids Pu रेनकोट, पेवा रेनकोट, पीभीसी पोंचो, पीभीसी रेनकोट,